HALGAN, oo la aasaasay 2006, waxaa ka go'an inuu noqdo bixiye caalami ah oo la ixtiraamo oo loogu talagalay alaabooyinka iyo adeegyada maqalka maqalka, dhacdooyinka shaashadda weyn iyo warbaahinta xayeysiinta. EACHINLED waa shirkad heer-sare ah oo tiknoolajiyad heer sare ah, oo ganacsigeedu ku lug leeyahay bandhigga kirada gudaha ee gudaha, shaashadaha LED-yada ee kirada banaanka ah, Shaashadda gudaha ee gogosha ah, Boodhadhka xayeysiinta ah ee dibadda iyo HD pixel LED-yada fiidiyowga iwm
Waagii hore, in ka badan 300 oo qof ayaa ka shaqeeya xarunta shirkadda, in ka badan 4 warshadood ayaa gudaha laga aasaasay. Shabakad adeeg isku dhafan iyo adeegga iibka kadib ayaa laga aasaasayaa adduunka oo macaamiisha siin doona xalal, tababar farsamo iyo taageero khaas ah.
EACHINLED wuxuu hayaa booska hogaaminta meheraddiisa ugu muhiimsan ee soosaarka shaashadda LED-ka, kaas oo bixin kara shaashado ballaaran oo gudaha, dibedda ah, iyo shaashadda kirada ah ee loo yaqaan 'LED kirada' oo leh pixel u dhexeeya P1.6-P31.25. Waxaa si ballaaran loogu dabaqayaa munaasabadaha arooska, munaasabadaha iskaashiga, gala, ciidaha, riwaayadaha, bandhigyada, dhacdooyinka isboortiga, shirarka, bandhigga gawaarida, warbaahinta xayeysiinta iyo qorshaynta dhacdooyinka, iwm.
HALKAN wuxuu sii wadi doonaa inuu iska daayo wax dadaal ah oo lagu xoojinayo booskeeda wax soo saar, tikniyoolajiyad iyo suuq ahaanba. WAQTIGEEDA had iyo jeer waxay gacan ka gaysataa dadaalkeenna si aan uga caawinno macaamiisheenna inay horumariyaan saamaynta muuqaalka iyo inay gutaan waajibaadyadooda bulshada.